သံလျင်ရှိငှါးရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19774703 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင်မြို့နယ်၊အောင်ချမ်းသာအပိုင်း(1)၊ လုံးချင်းအိမ် (အငှား)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19770400 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19766496 အတွက် Shwe San Eain Thit Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတမြို့နယ် သန်လျင်တံတားအဆင်း ရူခင်းသာလမ်းမအနီး RC 2လုံးချင်းအိမ်လေး ထောင့်ခြံ အမြန်ငှားမည် 09-262653500...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19764927 အတွက် Zaluck War Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန္​လ်င္​ၿမိဳ႕မ​ေစ်းနီး၊ ရပ္​ကြက္​သန္​႔၊48'x70'၊ RC-2ခြဲ, MB-2,BR-2,A/C၊ ျပင္​ဆင္ၿပီး။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19750338 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19740433 အတွက် Shwe San Eain Thit Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
♦♦♦ သန်လျင်၊မြတ်ရတနာအိမ်ရာ ♦♦♦လုံးချင်းအိမ်အငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19732468 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19731991 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19672384 အတွက် စည်တော်ကြီး အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန္​လ်င္​ၿမိဳ႕ပတ္​လမ္​းမ​ေပၚ၊ 60'x80'၊ RC-2,MB-4,A/C,ျပင္​ဆင္​ၿပီး။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19670218 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09788855333, 09420074367, 09785555699, 09421045692, 09403701234